ဟင်းရည်အရွက် - အသုံးပြုမှုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကုသမှု Laurel
စပ်ရာသီအဖြစ်မြှောင်ကိုအသုံးပြုသည်သောစက်ရုံ, ချက်ပြုတ်အတွက်ဒါပေမယ့်လည်းဆေးဝါးနှင့် cosmetology ထဲမှာမသာအသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ ရှည်လျားသောကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်လေ့လာဘယ်လိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးရည်ရွယ်ချက်များကြောင့်လျှောက်ထားရန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောအဘယျသို့ဂုဏ်သတ္တိများဟင်းရည်အရွက်, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုငါသိ၏။
ပိုအရသာမွှေးနှင့်အရသာရှိတဲ့, ဒါပေမယ့်ပိုမိုအသုံးဝင်မသာဖြစ်လာ, အရွက် Laurel ကထပ်ပြောသည်ရာမဆိုပန်းကန်။ တစ်ခုမှာလိုအပ်မှသာထက်ပိုမိုဆယ်မိနစ်များအတွက်ကုသမှုအပူကဖော်ထုတ်ဒါကြောင့်ချက်ပြုတ်မကုန်မီအကြောင်းကိုငါးမိနစ်များအတွက်အရွက်ကိုထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုလိုတယ်ပါဘူး, ဒီအမွှေးအကြိုင်များ၏တန်ဖိုးရှိသောအရည်အသွေးတွေကိုကယ်ဖို့သည်ဟုစဉ်းစားပါ။ အချောပန်းကန်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားများ၏အားထငျရှားမလိုချင်တဲ့ခါးသီးမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ချက်ချင်းဖယ်ရှားရမည်။
ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကုထုံးဂုဏ်သတ္တိများရွက်သောသိုလှောင်ထားသောဓာတုပစ္စည်းများဖွဲ့စည်းမှုအသုံးဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများနံ့သာမျိုး, သို့ဖြစ်. ဟင်းရည်ပြင်ဆင်နေ၌ထင်ရှား။ ကျနော်တို့တက်ကြွစွာတ္ထုများ Laurel ၏သက်ရောက်မှုလူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အရွက်စေဘယ်အရာကိုစာရင်းပြုစု:
အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ် (valerate, caproic အက်ဆစ်, acetic acid ကို);
ပြည့်နှက်ဖက်တီးအက်ဆစ် (lauric, myristic, oleic, palmitic);
သတ္တုဓာတ် (ကယ်လစီယမ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ကြေးနီ, သံ, etc);
ဗီတာမင် (အုပ်စုများ A, B, C က) ။
ဟင်းရည်အရွက် - အသုံးပြုမှု
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်, ရှေးဟောင်းဂရိနဲ့ရောမမြို့၏အဆကနေလူသိများသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး, အထဲတွင်ပါရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ဗဟုတဆင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတဖက်သတ်လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တွင်ကွိုးစားအားထုတျနိုငျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး decoction တစ်ခု universal ဆေးတစ်လက်စဉ်းစားသည်, သို့သော်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံအချို့န့်အသတ်ရှိတယ်ယနေ့အသက်ရှင်။ ယင်း၏အခြေခံသည်အနာပျောက်စေသောဂုဏ်သတ္တိဆောင်ခဲ့, အရွက်ထက်အသုံးဝင်သော decoction စဉ်းစားကြည့်ပါ:
ဟင်းရည်ပင်လယ်အော်အရွက် - ထိခိုက်ပျက်စီးမှု
ဒါဟာဟင်းရည်အရွက်ကိုသုံးနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုထိခိုက်စေရန်ကြိုတင်ဂရုတစိုက်အသီးအသီးအမှု၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်ကိုနားလည်ကြရပါမည်။ မည်သည့်ဆေးဝါးနှင့်ဝသကဲ့သို့, ရိုးရာဆေးပညာ၏မူးယစ်အထူးသဖြင့်အတွင်းပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဘို့, တည်ဆဲလက္ခဏာများနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီနှင့်သောက်သုံးသောနှင့်အတူလိုက်နာမှုတွင်အသုံးပြုရပါမည်။ အမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားသို့မဟုတ်ယုတျညံ့ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသည့်အခါကစနစ်တကျချက်ပြုတ်ပြုလုပ်လျှင်ဟင်းရည်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖို့ကန့်သတ်လျစ်လျူရှုလျှင်အပြင်, မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက် contraindications အတွင်းပိုင်းဧည့်ခံဖို့အောက်ပါရှိပါတယ်:
decoction Laurel ၏စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများရှိရေး:
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်၏ decoction ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဟင်းရည်အရွက်, အတွင်းပိုင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပြင်ပအပြောင်းအလဲနဲ့ထိခိုက်ဇုန်မှာသူ့ဟာသူကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်သည့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများအပြားချက်ပြုတ်နည်းများထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ရောဂါပေါ် မူတည်. ရွေးချယ်ထားသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သီးခြားစီပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ application ကိုလက်ခံရရှိအဘို့, အမျိုးမျိုးသောရောဂါဗေဒ၏ကုသမှုများအတွက်သင့်လျော်သောအရွက်၏ decoction, အောင်ဘယ်လိုတစ်လောကလုံးချက်ပြုတ်နည်းများရှိပါတယ်။ ဤတွင်ချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်ကြသည်။
အခြောက်လှန်း Laurel အရွက် - 15-17 PCs; ။
ရေ - 350 ml ကို။
ရေ Add နှင့်မီးပေါ်မှာထားတော်မူ၏။
အရွက်နှင့်အတူတစ်ဦး thermos သို့ဟင်းရည်ကိုလောင်းထပိတ်ပါ။
အပူပိုင်း Laurel အရွက် - 30 PCs; ။
အခြား5မိနစ်နဲ့သေးငယ်တဲ့မီးများအတွက်ကြွက်ကြွက်ဆူနှင့်အနာစိမ်းမှယူလာပါ။
အပူကနေ Remove နှင့်အနည်းဆုံးနာရီဝက်အဘို့မသွားအောင်, စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။
ဟင်းရည်အရွက် - လျှောက်လွှာ
ဖန်းဂတ်စ်နှင့် pustular အသားအရေကိုတွေ့ရှိရပါသည်, ချွဲအမြှေးပါး,
တစ်ဦးအားနည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် ;
မည်သို့ပင်အိမ်ခြံမြေများအလွန်အကျွံခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုစာစားချင်စိတ်ကိုဟင်းရည်ရွက်နှိုး။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးပိုလျှံအရည်, ဆားနှင့် slags ဖယ်ရှားခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ activation ကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်ကျန်းမာသောအစားအစာ, အာဟာရ, ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု, အရက်နှင့်ဆေးလိပ်ပိတ်ပင်မှုနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောနာရီဝက်တစ်မုန့်ညက်မတိုင်မီခေါ်ဆောင်သွား2ဇွန်းတနေ့သုံးကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။ ကုသမှုသင်တန်း - တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်။
အတော်များများကကျွမ်းကျင်သူများကပင်လယ်အော် decoction ၏ပုံစံအတွက်ဆီးချိုရောဂါအတွက်အရွက်ကိုအသုံးပြုရန်တစ်ဦးအကူအညီအဖြစ်အကြံပြုပါသည်။ ထိုသို့သောကုသမှုသာပျော့ရောဂါနှင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးနောက်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ မူးယစ်ဆေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဟင်းရည်အတွက်ပါရှိသောတ္ထုများ, အူထဲမှာနှေးကွေး bolus ဆိုက်ရောက်မှုနှုန်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အင်ဆူလင်၏လျော့နည်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူစွမ်းအင်သို့သကြားပြောင်းဘိုဟိုက်ဒရိတ်၏တစ်ဦးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်ပြီးမြန်ဆန်စုပ်ယူပေးသည်။ ဟင်းရည်အစာစားမတိုင်မီနေ့စဉ်သုံးကြိမ်ပေါင်း 100 ml ကိုတစ်သောက်သုံးသောယူ။
သည့်အခါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်ကို ယူ. အခြားသောနည်းလမ်း ကဆီးချိုရောဂါ သည်၎င်း၏ပြင်ပအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒီရောဂါလူနာဇီဝဖြစ်စဉ်နှောင့်အယှက်ကြောင့်အရေပြားမှပင်နည်းနည်းလေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆင်းရဲသည်အနာပျောက်စေသောဆင်းရဲစောင်ရေလည်းမရှိ, ကိုယ်ခံစွမ်းအားလျှော့ချ။ ဒီအမြင်အတွက်ဂရုတစိုက်အေးဂျင့်ကိုသုံးငြိမ်းစေလျက်, မည်သည့်အသားအရေစိတ်ဒဏ်ရာဆက်ဆံပါ, ဤအမှု၌ Laurel ကနေဟင်းရည်ထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်။ သင့်တယ် ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦး decoction ၏အခြေခံတွင်မဖြစ်စေခြင်းနှင့် compression ပျက်စီးသွားသောဒေသများသို့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
သူတို့ရဲ့နှောင့်နှေးစိတ်ဖိစီးမှု, နာမကျန်းခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အခြားအလုပ်လုပ်တဲ့အချက်များနှင့်ဆက်စပ်လေ့လာတွေ့ရှိလျှင်အမျိုးသမီးများ, လစဉ်ပင်လယ်အော်အရွက်အဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှောင့်နှေးထက်ပိုဆယ်ရက်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်၏ decoction တစ်လအသုံးပြုသည်, လိုအပ်သောလျှင်, ဇီဝကမ္မသွေးထွက်အနည်းငယ်ရက်မျှော်လင့်ထားသည့်ရက်စွဲ (ဥပမာ, နေ့ကိုဖွင့်အရေးပါသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လျှင်) မတိုင်မီစတင်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဟင်းရည် 200 ml ကိုတစ်ဦးငွေပမာဏကိုသာတခါယူရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်း၏အမျိုးအစားနှင့်ရရှိနိုင် display တွေပေါ်မူတည်ပြီးတည့်မှုအတွက်ပင်လယ်အော်အရွက်ယူနည်း။ poultices အဖြစ်ပြင်ပအသုံးပြုရန်အကြံပြုအေးဂျင့် itching တဲ့အခါမှာအရေပြားအဖု။ ဒါဟာပြည်တွင်းရေးအသုံးပြုမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအရွက်နှင့်အတူဤနည်းလမ်းပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်, ထိုကဲ့သို့သောဒီတော့ထွက် rhinitis, ဖော, ချောင်းဆိုး, သောအခါ, ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြံပြုခဲ့သည်။ ဟင်းရည်, သွေးကြောအားကောင်းစေရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်များဖိနှိပ်မစင်တာမျိုးကူညီပေးသည်။ ဒါကြောင့် 50 ml ကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်အောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုပါ။
အဆစ်အဘို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်ကပုံပျက်သော, တောင့်တင်း, နာကျင်မှုဖြစ်စေတဲ့, ညင်ညင်သာသာဆားသိုက်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်နိုင်အောင်။ အခြေခံကုသမှုသည်မညွှန်ကြားဆရာဝန်တစ်ဦးဖြည့်စွက်အဖြစ်ပြည်တွင်းရေးအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောပု musculoskeletal စနစ်၏ရောဂါများအတွက်လျှောက်လွှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လေ့လာခဲ့ကြပြီဖြစ်သောအရွက်, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှဤဟင်းရည်အမြင်၌တည်၏။ ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာ (2-4 pharynx) သို့ဤအသံအတိုးအကျယ်ဝေဖန်, တစ်နေ့လျှင် 350 ml ကိုဖြစ်သင့်သုံးပါ။ အဆိုပါသင်တန်းကို3ရက်, တစ်လုပ်နှစ်ပါတ်ချိုးလိုက်နှင့်ပြန်သင်တန်းကိုပြန်လုပ်ပါသည်။
ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက် Laurel ၏ဟင်းရည်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အရေပြားသုတ်နိုငျသော, မျက်နှာတစ်ခုဆီအဖြစ်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။ အရေပြားလိုက်တဲ့အခါအလွန်အကျွံအဆီအကြောင်းအရာဟင်းရည်ဖို့သံပုရာဖျော်ရည်အနည်းငယ်ကျဆင်းမှုကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ Laurel ဟင်းရည်ကနေဖန်ဆင်းတော်နံနက်ယံ၌ရေခဲတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းနှင့်အတူအရေပြားကိုသုတ်ဖို့လည်းအသုံးဝင်သည်။ ယင်းအပေါက်ကင်းစင်ဖို့ပူဟင်းရည် (- 10-20 မိနစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ကြာချိန်) ကိုကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အရေနွေးငွေ့ရေချိုးခန်းဖြစ်သင့်သည်။
ဟင်းရည် Laurel ဆံပင်
ထိရောက်သော decoction Laurel, သန့်ရှင်းရေးအရာ, ဆံပင်အဘို့အရွက်ဘောက်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရကူညီပေးသည်, သူတို့ကိုအခြောက်နဲ့မဖြစ်နိုင်, သော့ခလောက်တွေရဲ့ထပ်မံကျနှင့်အတူရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာများအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - decoction Laurel shag သုတ် shampooing ပြီးနောက်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆံပင်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အပြင်, ထိုကဲ့သို့သောလုပျထုံးလုပျနညျးတှေ-ဖြစ်လျက်ရှိတိုးတက်အောင်အထောက်အကူပြု, ဦးနှောက်အာရုံကြောတင်းမာမှု, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်းသက်သာရာ။
Veronica မူးယစ်ဆေး - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
ဆားနှင့်အတူဗော့ဒ်ကာကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?
Hawthorn berry သီး - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
သိမ်းကျုံး - ဝမ်းအနှိပ်
မြက်သံသတ္တုရိုင်း - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
Kalina Krasnaya - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
သငျသညျ chaezavisimy 14 အထောက်အထား
မကြာမီမင်္ဂလာဆောင်, Ed Sheeran ကသူ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြေငြာခဲ့သည်
ထွက်ပေါက် 2016 မှာက Short ဆင်မြန်း
Jumper, ဆွယ်တာအင်္ကျီ, pullover - ကွဲပြားခြားနားမှု
Glass ကို-ကြွေ hob
Modular မီးဖိုချောင် - ထောင့်နှင့်အဖြောင့်-အစွန်းဖြေရှင်းနည်းများ
အိမ်မှာ erysipelas ခြေထောက်၏ကုသမှု